Magaalooyinka Bosaso, Qardho, Caluula oo ay ka curteen roobab lagu diirsaday, hadana khasaare geystay. – Radio Daljir
Maajo 23, 2010 12:00 b 0
Garowe, May 23 – Qaybo ka mid ah magaalooyinka iyo tuulooyinka Gobollada Bari iyo Karkaar ayaa Waxaa ka da’ay roobab lagu diirsaday kuwaas oo qaarkood khasaare naf iyo maal leh Geystay.
Magaalada Bossaso ayaa Waxaa ka bilowday roob si wayn loogu diirsaday kaas oo soconayey mudo 6 saacadood oo xiriir ah, Waxaana roobabkaasi ay ahaayeen kuwo ay si wayn ay ugu qabowsadeen dadka rayidka ee ku nool halkaasi, kuwaas oo aad ugu farxay roobka.
Warar aan ka helayno Bossaso Waxaa intaasi ku sii darayaan in ay xirmeen isu socodka Gaadiidka iyo Ganacsiga magaalada Bossaso iyadoo ay buuxiyeen Wadooyinka magaaladaasi biyaha roobka; Waxaa kaloo dumay Guryo aan Tiradooda la shaacin iyadoona ay dadka barkacayaasha ah ee cooshadaha ku nool ay khasaarooyinka dhanka hoyga ahi soo wajaheen.
Degmada Caluula ee gobolka Bari ayaa Waxaa isna Xalay ka Curtay roobab mahiigaan ah kuwaas oo si wayn ay dadku ugu qabowsadeen iyadoo ay sii dheertahay khasaaraha Guryo dumay oo Gaadhaya ilaa 20 Guri oo ka dhesnaa degmadaasi balse lama soo sheegin khasaare kale oo nafeed uu geystay roobka; Duqa degmada Caluula ayaa idaacada Daljir sidaasi u sheegay.
Qardho ayaa sidoo kale roob culus uu xalay fiidkii ka bilawday. Waxaa uu roobkaasi socday ilaa saaka Taas oo keentay in ay maanta yaraato isu socodka dadka iyo baabuurta. Waxaana magaalada dhexdeeda soo buuxdhaafiyey biyaha roobka oo aad u baaxad waynaa.
Khasaare kale oo dhanka dhismaha ah ayaa jira, balse si toos ah looma shaacin Cadadka Guryaha dumay ee ay roobabku Geystay. Duqa magaalada Qardho C/quraan Maxamed Aadan ayaa Waxaa uu Daljir u sheegay in maanta magaaladu Tahay mid aan isu socod lahayn isagoo goobo khaas ah Tilmaamay in ay aad u liitaan dhanka biyaha buux dhaafiyey.
Degmooyin kale oo hoos taga gobollada Bari iyo Karkaar ayaa Waxaa ka Curtay roobab noocaan oo kale ah sidda aan Wararka ku helayno. Waxaa ka mid ah degmada Xaaji khayr ee Gobolka karkaar halkaasi oo uu isna ka da’een roobab xoogani; Sidoo kale Magaalada Garoowe iyo degmooyinka gobolka Nugaal ayaa Waxaa ka da’ay roobab mahiigaan ah.
Guud ahaan gobollada Puntland ayaa Waxaa laga dareemayaa nimcada rabbi oo si wayn u samaysay kadib markii ay ku hoobteen roobab fara badan oo si daba joogay.
Cabdiraxman Maxamed Xaaji
Maxamuud Sh Cumar, ku xigeenka Gudd. gobolka Cayn oo ka xog warramay khasaaraha iska-horimaadkii Buuhoodle.